Vaovao - Fahasamihafana eo amin'ny jirony tariby mifono vy mifangaro vy sy elektro
1. Fahasamihafana lehibe
Ny fantson-drano mafana dia manonitra ny zinc ao anaty rano, ary avy eo alentika ao anaty rano ilay substrate, ka ny zinc dia mamorona sosona manelanelana miaraka amin'ny substrate hapetaka, ka ny famatorana dia mafy tokoa, ary tsy misy loto na ny lesoka dia mijanona eo afovoan'ny sosona, ary ny hatevin'ny sarona dia lehibe, mety hahatratra 100 am, ka avo ny fanoherana ny harafesina, ny fitsapana famafazana sira dia mety hahatratra 96 ​​ora, izay mitovy amin'ny 10 taona amin'ny tontolo mahazatra; raha ny galvanizing mangatsiaka kosa dia tanterahina amin'ny maripana ara-dalàna, na dia azo fehezina ihany koa ny hatevin'ny sarona, fa somary kosa Raha ny tanjaka sy ny hatevin'ny plating dia ratsy ny fanoherana ny harafoana. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny karazan-tariby vita amin'ny tariby dia toy izao:
(1) Avy ety an-tany, ny harato tariby nohosorana mafana dia tsy mamirapiratra sy boribory toy ilay harato tariby vita amin'ny vy mangatsiaka.
(2) Avy amin'ny habetsaky ny zinc, ny harato vita amin'ny fantsom-bozaka nandrisika mafana dia manana atiny zinc avo kokoa noho ny tariby vita amin'ny vy mangatsiaka.
(3) Raha ny fahitana ny fiainam-panompoana dia manana androm-piainana lava kokoa ny harato vita amin'ny fantsom-boaloboka nandrendrika mafana kokoa noho ny volon-tariby vita amin'ny fantsona elektro.
2. Fomba famantarana
(1) Mijery amin'ny masonao: ny faritra ambonin'ilay harato vita amin'ny fantsom-boaloboka nandrendrika mafana dia tsy milamina ary misy sakana zinc kely. Ny velaran'ny harato vita amin'ny tariby vita amin'ny rivotra mangatsiaka dia malefaka sy mamiratra, ary tsy misy sakana kely zinc.
(2) Fitsapana ara-batana: Ny habetsaky ny zinc amin'ny tariby fantson-drivotra elektrika milentika mafana dia> 100g / m2, ary ny habetsaky ny zinc amin'ny tariby fanamafisam-peo matevina dia 10g / m2.